दुखद खबर: बिहेमा दाइजो कम भएको भन्दै ८ महिनाकि गर्भवती महिलाको ह’त्या, मनमा अलि पनि दया भए (RIP) लेख्नुहोला ! – Khabar28media
दुखद खबर: बिहेमा दाइजो कम भएको भन्दै ८ महिनाकि गर्भवती महिलाको ह’त्या, मनमा अलि पनि दया भए (RIP) लेख्नुहोला !
January 19, 2021 February 8, 2021 - by admin - LeaveaComment
नयाँ दिल्ली: दहेज एउटा प्रचलन हो जुन समाजको लागि श्रा प हो। यसको बाबजुद पनि, मानिसहरूले यस अभ्यासलाई लामो समयदेखि जीवित राख्दै आएका छन्, आज दहेज सम्बन्धी एक धेरै चौं:काउने घ टना बाहिर आएको छ। दा इजो सम्बन्धित यो घ टनाको बारेमा सुने पछि तपाईको र गत पनि उ म्ल ने छ। जहाँ एक महिला केहि महिना अगाडि बिहे गरेर सासु-ससुरामा आई। सासु ससुरा आएको केही दिन सम्म सबै ठीक थियो, तर केही दिन पछि ससुरालीहरूले उनलाई दहेजको आ रो:पमा केटीमाथि द बाब दिन थाले।
भनिन्छ कि यो दहेजको का रण हो कि मन्जितका सासु-ससुराले उनलाई ल्याएको दिनमा उनलाई कु ट:पि:ट गर्थे। यदि मनजितका बुबा हरप्रीतले विश्वास गरे भने विवाहपछि मन्जितका ससुरालीहरूले हरप्रीतलाई आफ्नी छोरीलाई फिर्ता लैजान वा पैसा र दहेजको माग पूरा गर्न धेरै पटक बोलाउँथे। तपाईंलाई थाहा छ:क्क लाग्नेछ कि मञ्जित जसको साथ विवाह भएको थियो केटो सेनामा कार्यरत छ। सेनामा भए पनि केटाले आफ्नी पत्नी र बुबालाई ज ब र ज’स्ती दहेज दिन लगाए।
Previous Article गायिका हुनुभन्दा पहिला रचना रिमालले गर्ने गर्थिन् यस्ता काम , हेर्नुहोस् उनको दुख पछि को सुख
Next Article दुखत खबर : गोदावरीमा टिपर दु’र्घ टना एकको मृ त्यु (फोटो फिचर)